Uyilo lwefanitshala eyenziwe ngekhadibhodi ngendlela ezinzileyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo lwefanitshala eyenziwe ngekhadibhodi
Uyilo ifanitshala eyenziwe ngekhadibhodi ngenjongo yokwenza ifayile ye- isindululo sokuziphatha ngakumbi nendalo esingqongileyo ngelixa kufezekiswa uyilo lwanamhlanje ebonisa enye ifanitshala engenazinkqubo zongcoliseko ngexesha lokwenziwa kwayo. Kule meko siza kubona ifanitshala eyenzelwe abantwana, ifenitshala yekhadibhodi yabantwana abakwaziyo ukuguqula umbono wefanitshala ube yinto enokubakho. hlanganisa uze udibanise ngokukhawuleza.
Inkampani enezimvo ngekamva isemva koku indlela entsha yokudala ifanitshala ekwaziyo ukuza nesindululo esinomdla ngokusebenzisa iinkqubo zokuvelisa ezintsha zedijithali ukucinga ngaphambili ngazo zonke iindlela. Ngaphandle kwamathandabuzo kunjalo enomtsalane, itsala amehlo kwaye inesidima ngabadali.
Imibala eluhlaza eluhlaza yenza ifenitshala eyenziweyo ngekhadibhodi kuphela. Banikezela ngezisombululo ezishushu nezala maxesha, zihlala zikhona Iyahlonipha okusingqongileyo ukuzalisekisa oku izimvo ezintsha zokwenza idijithali. Iimveliso zayo zenzelwe ukuba zihlale zihlangabezana neemfuno zabantwana ngendlela ezinzileyo. Yifenitshala smart, ukukhanya, kulula ukudibanisa kunye nokusetyenziswa, ukubonelela ngeeyure ezininzi zokuzonwabisa kubazali nakubantwana.
Xa sithetha ngemveliso ye-eco, kule meko a ifanitshala ezinzileyo Kuya kufuneka siyenze ngokwembono ebanzi kakhulu, sikuphephe ukugxila kwingxaki enye xa kufikwa ekufumaneni imveliso ehlonipha okusingqongileyo. Ukuba sifuna ukuyila imveliso ezinzileyo kufuneka cwangcisa uyilo olupheleleyo ukucinga ngayo yonke amanqanaba obomi Yale mveliso: ukufumana izinto ezingavunyelwanga, ezothutho, ezokuvelisa, izixhobo, ukurisayikilisha ... Kukho uluhlu olubanzi lweenkcukacha ekufuneka sizikhumbule kuba umsebenzi womyili awujolisanga kuyilo kuphela kodwa yenza into efanelekileyo Ngandlela zonke, imveliso esebenza ngeyona ndlela ibalaseleyo.
Ukuba uyila imveliso kufuneka ubenayo ezinye izinto ezicacileyo:
Ndingayila njani imveliso ngendlela ezinzileyo?
Zeziphi izinto endinokuzisebenzisa? Zivela phi ezi zinto? Ngaba izinto ziyahlangabezana neemfuno zam?
Ngaba ngumntwana ozalelwe ezalweni okanye a ndizala ngcwaba? (Ubomi obumbaxa okanye uyilo oluvaliweyo)
Ndingayenza njani imveliso? Ukuveliswa kwedijithali? Amalungiselelo?
Ezi zezinye zezinto eziqhelekileyo ekufuneka sizikhumbule xa kusenziwa Yila imvelisoNangona kunjalo, xa sisenza imveliso kuya kufuneka siye phambili kwaye sizazise ngezi ngcaciso ngokweenkcukacha. Isiphelo sale nto kukuba sinoyilo lwe imveliso engenakwenzeka kwihlabathi lokwenyani ngokungathi sinomsi olula.
1 Umbala we-Eco: ikhadibhodi ezalwa
2 Itafile ye-Eco: itafile yendalo
Umbala we-Eco: ibhokisi yekhadibhodi
Esi sibhedlele si eyenziwe ngekhadibhodi kwaye yenzelwe ukukhathalela iintsana kwiinyanga zokuqala. Ukubeleka Echo Cradle, Ingabekwa ecaleni kwebhedi yabazali, kubude obuchanekileyo ukuze ubashukumise. Ngaba ayisindi, enamavili, idibanisa kwaye idibanise kwimizuzwana akukho zixhobo zifunekayo, ilungele ukuhamba. Inokuphinda isebenze kwakhona kwaye ichasane nokutsha.
Ngoyilo lwalesi sibhedlele siyayibona ukucwangcisa kwangaphambili kuye kwafuneka ukuba bakhulise ukuze bafikelele Isiphelo esisebenzayo, esilula nesiluncedo. Singazibuza le mibuzo ilandelayo: Luyintoni uxhathiso olufunwa yimveliso yam? Ngaba iya kuthwala ubunzima obukhulu? Ngaba izinto zikhuselekile? Iza kusetyenziswa njani imveliso? Ibhedi yenzelwe umntwana ke ngoko ayifuni sakhiwo esingqina ibhombu (into eyenziwayo kuninzi lweemveliso), indawo yokulala ingadityaniswa idilizwe ukuze isuswe kwenye indawo iye kwenye ngokukhululekileyo.
Itafile ye-Eco: itafile yendalo
Omnye itheyibhile eyenziwe ngekhadibhodi yenzelwe abantwana kodwa uyakwazi ukuxhasa ubunzima be-120kg. Ubunzima bayo bokukhanya kunye nendibano elula kunye nokuphatha kuyenza itafile efanelekileyo ezincinane. Ikhadibhodi ibonelela nge- indawo ekhuselekileyo yomntwana kuba lo mbandela unelungelo lokungabi nzima ngokuchasene nokubethwa. Ukucoca akuyongxaki kuba umphezulu wayo inokucocwa Akukho ngxaki.
Ikhadibhodi yinto ehlala ihleli nathi kodwa asikaze siyijonge njengamandla ulwakhiwo oluzinzileyo. Uyilo kunye ne Itekhnoloji kunye nokuyila Bavule iminyango ekwenziweni kwedijithali kunye nazo zonke izibonelelo ezisinika zona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyilo lwefanitshala eyenziwe ngekhadibhodi
Iprojekthi yemizobo exhasa uxolo lwezixhobo zomhlala-phantsi
35 ezinye iziphumo zombhalo zeCSS kwiwebhusayithi yakho